Daawo:- Barkhad Abdi oo soo wado filim cusub oo Dabka lagu magacaabay. | Arrimaha Bulshada
Home News Daawo:- Barkhad Abdi oo soo wado filim cusub oo Dabka lagu magacaabay.
Daawo:- Barkhad Abdi oo soo wado filim cusub oo Dabka lagu magacaabay.
Monday, August 14, 2017 News Edit
Bulsha:- Jilaaga Soomaaliyeed ee Hollywood Barkhad Abdi ayaa soo wada filim kale oo Mareykan ah oo ka hadlaya qisa ku saabsan burcadeeda Soomaalida , Filimkan oo lagu magacaabo Dabka ayaa waxaa lagu matalay meel u muuqaal xeebaha Soomaaliya iyadoo qisada filimkana ay ka turjumeyso Canadian nin ah oo la kulmaya burcadaasi oo uu hogaaminayo Barkhad.
Barkhad Cabdi ayaa cana ku ahaa filimkii Captain Philips ee laga sameeyay qisa dhab aheyd oo ka dhacday xeebaha Soomaaliya, filimkaasoo uu Barkhad ku helay abaal marino fara badan isagoo xataa ku sigtay inuu qaato Oscar ka.
Waxa Barkhad uu haatan caan ku noqday filimada burcad badeednimada iyadoo sanadkaan uu xataa keenay filim kale oo lagu magacaabo Extortion.